Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo muddo saacado ah la wareegay gacan ku haynta deegaanka Haluuqa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo muddo saacado ah la wareegay gacan ku haynta deegaanka Haluuqa
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Haluuqa oo ka tirsan degmada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxay sheegayaan in dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen tuuladaasi, iyagoona kadib muddo saacado ah halkaasi qabsaday.
Wariye ku sugan degmada Gaarisa ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo wata gaadiidka dagaalka ah ay gudaha u galeen deegaanka Haluuqa, iyagoo aan wax iska caabin ah la kulmin.
Ciidanka booliska Kenya ee ku sugnaa deegaanka Haluuqa ayaa la sheegayaa inay halkaasi isaga baxeen kahor inta aysan dagaalyahanada Al-shabaab soo galin.
Dhinaca kale, dagaalyahada Al-shabaab ayaa la sheegayaa markii ay gudaha u galayeen deegaanka Haluuqa inay gubeen xarunta isgaarsiinta Safaricom oo ku taalay halkaasi.
Ugu dambeyntii, dagaalyahanada Al-shabaab ayaa inta badan weeraro is-daba joog ah ka geysta gudaha dalka Kenya, waxayna weeraradaasi wadeen tan iyo intii dowladda Kenya ay ciidamadeeda usoo dirtay dalka Soomaaliya.